Jarida Laser ee Dharka Dijital-Sublimation Daabacaadda Digital - Goldenlaser
Goynta Laser ee Dharka Dijital-Sublimation Daabacaadda Digital
Maalmahan tikniyoolajiyadda daabacaadda waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha kala duwan sida dharka isboortiga, dharka dabbaasha, dharka, boorarka, calammada, iyo calaamadaha jilicsan. Nidaamyada daabacaadda dharka daabacaadda ee maanta ayaa u baahan xitaa xalal goyn deg deg ah.
Waa maxay xalka ugu fiican ee jarista dharka daabacan iyo dharka? Dhaqdhaqaaqa gacanta ama goynta farsamada ayaa leh xaddidaadyo badan. Goynta laser-ka ayaa noqda xalka ugu wanaagsan ee goynta dusha sare ee sublimation dheeha daabacan dharka sublimation iyo dharka.
Xalka goynta laser-ka ee aragtida Goldenlaser wuxuu automates ka dhigayaa habka jarista dheeh sublimation dheeh qaababka daabacan ee dharka ama dharka si dhakhso leh oo sax ah , si toos ah loogu magdhabo wixii dhalanrog ama fiditaanno ka dhaca dhar aan xasilloonayn ama fidsan.
Kaamirooyinka ayaa baaraya dharka, ogaanaya oo aqoonsanaya dusha daabacan, ama soo qaadaysa calaamadaha diiwaangelinta ee daabacan ka dibna mashiinka laser-ka ayaa jaraya naqshadaha la doortay Geedi socodka oo dhan si buuxda otomaatig ah.
Faa'iidooyinka jarista dharka dheeh-hoosaadka leh nidaamka leyskeenna aragtida ah?
Si sax ah oo qumman si toos ah uga jar duubista
Si fudud loo shaqeeyo - Si otomaatig ah u aqoonsado dusha daabacan
Ka baaraandeg la'aanta aan la xiriirin - Majiro dhar
Wixii funaanad, shaati polo ah, funaanado, dharka, goonooyinka, gaagaaban, shaatiyada, maaskaro wajiga, garbasaarrada, iwm.
Teendhooyinka, shiraacyada, gogosha, miisaska la tuuro, buufinta iyo gazebos, iwm.
Waxaan kugula talineynaa mashiinada goynta leysarka soo socda ee dheehida sublimation dharka maryaha daabacan iyo goynta dharka